सडक विस्तारलार्इ लावारिस छाेड्दाकाे अवस्था...! (फाेटाेफिचर) - Naya Patrika
सडक विस्तारलार्इ लावारिस छाेड्दाकाे अवस्था…! (फाेटाेफिचर)
झापा | फागुन ०१, २०७४
शब्द-तस्बिर : लक्ष्मी काफ्ले
जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्नो ठाउँको विकास हुन्छ भन्ने आशा बोकेका सर्वसाधारण जनप्रतिनिधिकै कारण हैरानी खेप्दैछन् । बिर्तामोड नगरभित्रका सडकलाई फराकिलो बनाउन सुरु गरिएको अभियान जनप्रतिनिधिकै कारण रोकिएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय दमकको पहल तथा बिर्तामोड नगरपालिकाको अग्रसरतामा पुसको पहिलो साता बिर्तामोडको मुक्तिचौकदेखि चारैतर्फका सडक खाली गराउन थालिएको थियो । वर्षौंदेखि सडक मिचेर राखिएका फुटपाथ पसल हटाउन केही दिन डोजरसमेत चलाइयो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा २५ मिटर दायाँबायाँ र भद्रपुर रोड तथा शनिश्चरे रोडको १५ मिटर दायाँबायाँ निर्माण भएका संरचना भत्काउने सहमति भएको थियो । तर, भद्रपुर रोडको सडक बिस्तार गर्दागर्दै अभियान एक्कासी रोकिएपछि स्थानीयबासी अचम्ममा परेका छन् ।
नगरपालिकाले थालेको अभियान द्रुत गतिमा अघि बढाइने बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीले बताएका थिए । अहिले पनि बिहान–बेलुका नगरपालिका कार्यालय आउजाउ गर्दा मेयर शिवाकोटीले प्रयोग गर्ने सडक यही नै हो । तर, सडक बिस्तार कार्य रोकिएको महिना दिन बितिसक्दा समेत नगरपालिकाले केही गर्न सकेको छैन ।
सडक विस्तारको काम रोकिएपछि बिर्तामोड झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । सडक अतिक्रमण हटाउँदा डोजरले ढलसमेत भत्काएको थियो । अहिले त्यहाँबाट दुर्गन्ध आउन थालेको छ । भत्काइएको सडक पुनः निर्माण नगर्दा धुलोले सर्वसाधारण सास्ती झेल्दैछन् ।
‘भत्काउनुभन्दा अगाडि नै सडक बनाउनका लागि टेन्टर लगाउनु पथ्र्यो, अनि मात्र भत्काउन सुरु गर्नुपथ्र्यो,’ बिर्तामोडकी सीमा ढुंगानाले भनिन्, ‘आधा सडक भत्काएर अलपत्र छोड्ने थियो भने किन भत्काइयो ?’
सडक बिस्तार गर्ने भन्दै केही दिनसम्म डोजर चलाइँदा भद्रपुर रोडमा खानेपानीका पाइप काटिएका छन् । सडक किनारमा पानीको पाइप फुटेकाले अहिले सडकमा पानी बगिरहेको छ । पाइप फुटेकाले ढल पनि खानेपानीमै मिसिएको छ । जनप्रतिनिधिले यस विषयमा बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
किन रोकियो सडक बिस्तार ?
सडक बिस्तारको काम चलिरहँदा वडाध्यक्षहरुमा विवाद आएको स्थानीयको आशंका छ । बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत पशुपती खतिवडाले भने कुनै वडाको पनि विवाद र अवरोध नरहेको बताएका छन् ।
४ नम्बर वडाको सडक अतिक्रमण हटाएपछि ३ नम्बर वडाको सुरु गर्ने बेलामा अभियान स्थगित भएको नगरपालिका स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिएको छ । ‘भत्काएर मात्र के गर्नु, भत्काएपछि तत्काल बन्ने छाँट देखिएन अनि भत्काउन छोडिएको हो,’ नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘सडक बन्ने निश्चित नभएसम्म नभत्काउँ भनेर बिचैमा छाडियो, अब सडक निर्माणका लागि टेन्डर लाग्दैछ ।’
बिर्तामोड–३ नम्बरको सडक बिस्तार गर्दा बिर्ताबजार आसपासका दर्जनौँ घरहरु पनि भत्किने नगरपालिकाका कर्मचारीले बताए । ती घरहरु भत्काउँदा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने भएकाले अभियान रोकिएको हो । तर, आधा सडक भत्काएर अलपत्र छाडेपछि बिर्तामोडबासीले भने समस्या झेलिरहेका छन् ।
सडक बिस्तार कार्यले पूर्णता नपाउँदा सडक आसपासका रुखका पातसमेत धुलाम्मे देखिएका छन् । रोचक कुरो त के छ भने, नगरपालिका कार्यालयको अगाडि ‘प्रत्येक घरमा चर्पी बनाऔँ’ लेखेको एउटा ठूलो बोर्ड छ । तर, सडकको धुलोले बोर्डका सबै अक्षरलाई छोपिदिएको छ ।